यो पनि हुन सक्छ कि तपाइँ 'पीडित' परिप्रेक्ष्यबाट आपराधिक कानूनको सामना गर्नुपर्‍यो। आजका दिनहरुमा हामी इन्टरनेट को माध्यम बाट अधिक खरीद गर्छौं। सामान्यतया यो सबै ठीकसँग जान्छ र तपाइँले अर्डर गरेको कुरा पाउनुहुन्छ। दुर्भाग्यवस, कहिलेकाँही यो गल्ती हुन्छ: तपाईले केहि चीजहरूको लागि धेरै पैसा तिर्नुभयो जुन टेलिफोन वा ल्यापटपमा हो, तर विक्रेताले कहिले पनि सामान डेलिभर गरेको छैन र त्यसो गर्न चाहेको छैन। जे भए पनि, यदि तपाइँ तपाइँको सम्पत्ती कहाँ छन् भनेर सूचित गर्न चाहानुहुन्छ भने, विक्रेता कहिँ भेटिएन। यस्तो अवस्थामा तपाईं आपराधिक घोटालाको शिकार हुन सक्नुहुन्छ।
के तपाइँ धोखाधडीको अभियोग लगाउनु भएको छ?
हामी तपाईंलाई सल्लाह दिन सक्छौं
के तपाईं कर्पोरेट फौजदारी कानून मुद्दाहरूको जोखिम उठाउनुहुन्छ?
के तपाईलाई स्क्याम गरिएको छ?
कानूनी प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस्